China China fekitori yezvakakwana biodegradable PLA simudza kurongedza kraft mapepa mabhegi ane hwindo uye zipi fekitori nevagadziri | Oemy
Guangzhou Oemy Environmental Hushamwari Packaging Co., Ltd.
Kofi & Tea Mabhegi
Zvipfuwo Zvekudya Mabhegi
Mupunga Packaging Bag
Hutano &Kubika Chikafu Mabhegi
Simuka-homwe ine hwindo uye zipi
Kusimudza-homwe isina hwindo
Simuka-up-pouch isina zipper
Eight-side-chisimbiso mabhegi ane zipper
Eight-side-chisimbiso mabhegi asina zipper
Matatu-side-chisimbiso mabhegi asina zipper
Matatu-side-chisimbiso mabhegi ane zipper
Kumashure-chisimbiso-mabhegi pasina gusset
Kumashure-chisimbiso-mabhegi ane gusset
Quad-side-seal gusset mabhegi
One-side-seal gusset mabhegi
Yakanyanya kuvharira VMPBAT biodegradable packaging
China mutengesi we back-yakavharwa eco bag compostable pa...
China mutengesi weskweya pasi kurongedza necompo ...
China fekitori yezvakakwana biodegradable PLA simuka p...
China mutengesi weimwe-side-chisimbiso packaging yetii le...
Eight-side akavharwa sikweya pazasi mabhegi ekurongedza e...
Kupisa Chisimbiso Tea Bag Sefa Pepa mumupumburu
OEMY Tsika 8 divi rakavharwa mativi pazasi compostable ...
Yakachena yegirini inogona dhiragoni bepa kusimuka pouch uye tra...
Brown Pepa Square pazasi kurongedza mabhegi ane AL foi ...
Environmental ushamwari simuka chikwama chakaomeswa chikafu pac...
OEM sikweya pazasi shava kraft bepa kofi upfu pa...
Nyowani biodegradable zvinhu square pazasi kurongedza b ...
Creative printing biodegradable packaging masaga emupunga
Nyanzvi inogadzira yakazara biodegradable nati...
China fekitori yemichero yakaomeswa kurongedza kumashure akavharwa mabhegi
China mugadziri wemavara anodhinda kraft bepa ...
China fekitori yekuzara biodegradable PLA inosimuka kurongedza kraft mapepa mabhegi ane hwindo uye zipi
Tumira neindaneti kwatiri Dhaunirodha sePDF
Yakazara biodegradable PLA inosimuka yakarongedza kraft mapepa mabhegi ane hwindo uye zipi , mashizha etii kurongedza, kurongedza kofi bhinzi, kana zvimwe zvigadzirwa zvekurongedza masaga.
Iyi haingori mabhegi akareruka ekurongedza ezvigadzirwa zvako. Uyu ndiye mutakuri wemhando yekambani yako, kushambadzira kwenhare, kukosha kutaurirana. Chinonyanya kukosha ndechekuti ishamwari yezvakatipoteredza.
1.Mabhegi ekuputira akagadzirwa nePLA + PBAT + Kraft mapepa, ayo ari compostable materials.
2.Apo bhegi rekuputira rinopedza basa rayo rekutengeserana, rinogona kuderedzwa kuva ivhu mugore uye rinotorwa nemiti. Zvamazvirokwazvo zvakabva kune zvakasikwa uye kudzokera kune zvakasikwa.
3.No more kusvibiswa kune zvakatipoteredza. Nyika ichava nani uye nani.
Iyo data yeruzivo rweiyo biodegradable packaging mabhegi
Material: PLA+PBAT+ Kraft bepa
Style Options Flat Bottom, Simuka, divi gusset, Zipper Top, With kana pasina Window, Euro Hole, etc.
Kuisa chisimbiso & Kubata Kupisa Chisimbiso
Surface Kubata Embossing
Kudhinda: Copperplate yokudhinda, Kushaya rokudhinda
Ruvara: Kusvikira 10 ruvara kana No kudhindwa
Mutengo: Zvichienderana nechigadzirwa Zvishandiso, Dimension, Huwandu, Kudhinda mavara uye zvimwe zvinodiwa nemutengi (Mutengo wakatumirwa kuti utarise chete)
Muripo: T/T, Paypal, Western Union, Trade Assurance inobvuma
30% mutengo webhegi + 100% kudhinda masilinda kubhadharisa sedhipoziti, 70% chiyero chisati chatumirwa
Apex Tumira kunze akajairwa kurongedza makatoni / mabhokisi (≤25Kg), sekuenderana kwakagadzirirwa kurongedza
Iyo Feature Mifananidzo yeBiodegradable Packaging Bags
Chinhu chakakosha cheiyo biodegradable packaging mabhegi
1.Iyo yakasimba zipper, yakagadzirwa nePLA, inogona kuvhurwa uye kuvharwa kakawanda,
Vimbiso kusimba kwebhegi. Inogona kuderedzwa muvhu
3. Yakanakisa kusapinda kwemvura kuita
Bhegi haripindire mvura uye rinodzivirira hunyoro, uye zviri nyore kubata ne tembiricha yakaderera uye mwaka wemvura.
4.Yakakwirira mhando yeKraft bepa, biodegradable PLA+PBAT firimu, ' se nvironmentally hushamwari uye kukosha kukuru
5.Strong stand- up bottom , ine hombe yekutakura
6.Strong tensile. Iyo bhegi yekurongedza ine yakanaka yekudzivirira kubvarura uye yakasimba
7.Milky white transparent window, ichi chiratidzo chakakosha chokuti ichi chinhu chakazara chakasvibiswa.
8.Chimiro chehwindo chinogona kuve chemunhu dhizaini, hapana guruu, guruva-uchapupu
1.Mumusika, 99.9% yemagetsi emhepo inogadzirwa nePE plastiki, uye inotora makore 1000 kuti iparadze zvachose. Kukuvadza kukuru kune zvakatipoteredza. Nekudaro, iyo PLA air valve inogadzirwa nechirimwa zvinhu uye inogona kuderedzwa muvhu mukati memakore 2-3. Iva mvura uye carbon dioxide inotorwa nezvirimwa.
2.Iyo inyanzvi yakaoma kugadzira valve yemhepo kubva kuPLA. Iyi tekinoroji iri mumaoko evazhinji vashoma vagadziri, kambani yeOEMY imwe yacho.
Saizi yakakurudzirwa yemabhegi ekurongedza emaside
Iko Kushandiswa kwemabhegi ekurongedza
1.Biodegradable packaging bags mabhegi ane hushamwari hwezvakatipoteredza ane zvakawanda zvakasiyana-siyana. Inonyanya kushandiswa kurongedza: coffee bean,coffee powder ,Tea leaves, Rice, dried fruit, snack food, dried meat, whole grains, tea ,etc.
2.Inguva yekuchinja mabhegi ako epurasitiki ekurongedza kuita biodegradable packaging mabhegi. Kusvibiswa kushoma kune zvakatipoteredza, kuwedzera kusvibira kupasi.
Matanho ekutengesa kwedu uye kugadzira.
1.OEMY kambani inyanzvi mukupa bio-degradable packaging mhinduro dzezvigadzirwa zvakasiyana.
2.Client ndiyo yedu yekutanga yekutanga. Isu takatsaurirwa kusangana nevatengi. Inoda uye kuisa yakawanda sosi muR&D. Basa redu nderekupa chigadzirwa chakakodzera uye sevhisi kune vatengi vedu.
3.Tine muchina wakanakisa uye matekinoroji epamusoro mukati meindastiri kuti tibudise zvakanyanya uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa. Isu tinovimbisa kuti zvese zvaunoda zvinozadzikiswa nenguva.
4.Kubudirira kwedu kunoenderana nekutsigirwa kwevatengi. Kubudirira kwako ndiko kunetseka kwedu! Isu tinorongedza kubudirira kwako, mapakeji ako akanaka anotanga kubva pano.
Tora yakagadziridzwa yekurongedza mhinduro kubva kune yako odha izvozvi.
A: Hongu, Isu tiri makore gumi nemashanu mugadziri anobatanidza R&D, kugadzira, kugadzirisa uye kushambadzira. Fekitori yedu Dongguan Guta reGuangdong Province.China
A: Mhando yebhegi, zvinhu, saizi, ukobvu,Uremu hwechigadzirwa hunodiwa
A: Stock samples yemahara, asi iwe unofanirwa kubhadhara iyo yekutakura.
Kana iwe uchida kuti isu tiite sampuli nedhizaini yako, unofanirwa kubhadhara mutengo wemuenzaniso. Uye kana ukaisa odha mune ramangwana uye huwandu hunosvika imwe nhamba, tinogona kudzosera mutengo wemuenzaniso kwauri.
A: Hunhu uye 100% mabhegi anoodegradable ndiyo tsika yedu, tinobatanidza kukosha kukuru kukutonga kwemhando kubva pakutanga kwekugadzira, tichishandisa 100% biodegradable zvinhu kugadzira mabhegi ekurongedza, akadai isu PLA, PBAT etc.
A: Hongu. Uye iyo 100% biodegradable air valve uye zipi zvakagadziridzwa nenyanzvi dzedu.
A: Kwete. Isu tiri kambani yakasimbiswa. Isu tinonzwisisa kuti munhu ane copyright mune yake / yayo trademark. Isu tinoremekedza kodzero uye kuvanzika kwevatengi vedu uye hatisi kuzozivisa kune vamwe.
A: Nguva yedu yekuendesa kazhinji mukati memazuva 15-25, asi nguva chaiyo yekuendesa inobva pane zvinodiwa
Previous: China fekitori yekumashure yekuvharisa mabhegi gusset biodegradable packaging yemashizha eti
Next: China yekurongedza mutengesi weiyo biodegradable PLA simuka kurongedza kraft mapepa emabhegi
biodegradable PLA mabhegi
compostable PLA mabhegi
compostable PLA kurongedza
compostable PLA yekurongedza bhegi
compostable PLA yekurongedza mabhegi
compostable PLA yekurongedza pouch
compostable PLA yekurongedza pouches
kumba compostable PLA bag
kumba compostable PLA mabhegi
kumba compostable PLA kurongedza
kumba compostable PLA yekurongedza bhegi
kumba compostable PLA yekurongedza mabhegi
kumba compostable PLA yekurongedza pouch
kumba compostable PLA yekurongedza pouches
kumba compostable PLA pouch
kumba compostable PLA pouches
Simukai raanoziva bepa mupunga kavha back ne W ...
China mutengesi we 3 padivi rakavharwa kurongedza kwep ...
Biodegradable simukai Nut kavha mumasaga ne ...
Opaque aruminiyamu foil kavha mumasaga kuti utano ...
China mutengesi we back-yakavharwa eco bag compostab...
3 Marudzi eAzere Degradable Compostable S...
Zvakanakira kraft bepa mune chikafu pac ...
Biodegradable Bag-White Kusvibiswa T...
Zvimiro zveBiodegradable Materials
OEMY yakabudirira kugadzira VMPBAT
Dried Fruit Packaging homwe , Non-sadza Food Packaging Bags, Dried Fruit homwe , Pet Food Packaging Bags , Dried Fruit Pouches , Health Food Packaging Bags ,